कहाँबाट को छानिए एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि ? (सूचीसहित) « Deshko News
कहाँबाट को छानिए एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि ? (सूचीसहित)
नेकपा (एमाले)को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि देशभरि नै प्रतिनिधि छनोट भएका छन् ।
एमालेले एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र एक दलित गरी पाँच प्रतिनिधि महाधिवेशनका लागि चयन गरेको छ । एमालेले चयन गरिएका प्रतिनिधिको विवरण यहि कात्तिक ३० गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
एमालेले महाधिवेशनका लागि एक हजार ९९९ प्रतिनिधि चयन गर्ने छ । एमाले महाधिवेशन यही मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ । विधान महाधिवेशन सकाएको एमालेले अबको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
दलित : बाबुराम विश्वकर्मा।